Indlela Yokutsho Yenza ngesiSpeyin
Ukuguqulelwa kwesiNgesi sesiNgesi esiqhelekileyo kuxhomekeke kwiNjongo
Umbuzo: Ndinenkxalabo "vumela." Ngokomzekelo, ndiza kucinga, "Makhe ndibhale phantsi." Ndingayichaza kakuhle njani lesi sigwebo ngesiSpeyin?
Impendulo: "Makhe" ngenye yamagama esiNgesi anokuguqulelwa ngeendlela ezininzi ngeSpanish, kuba "vumela" ngokwayo kunentsingiselo ezininzi.
Ngokomzekelo owawunikelayo, kwiimeko ezininzi ndiza kuthi, "I- Quiero apuntar eso ," enegama elithethayo "Ndifuna ukubhala phantsi." Ukuba unqwenela ukuguqulela ngokuchanekileyo kwaye ngokwenene ufuna imvume yokuthatha amanqaku, sebenzisa " Dejame apuntar eso " okanye " Dejeme apuntar eso ," kuxhomekeka ukuba uthetha umntu oqhelekileyo okanye osemthethweni , ngokulandelanayo.
I-Dejar isenzi esona siqhelo esithetha "ukuvumela," ngoko oko uthethayo "ndivumele ukuba ndibhale phantsi."
Yintoni ebalulekileyo xa uguqulela kolunye ulwimi ukuya kolunye kukujonga intsingiselo yento ofuna ukuyithetha nokuguqulela ukuba kunokuzama ukuguqulela amagama. Awukwazi ukuguqulela "vumela" ngendlela efanayo ngaso sonke ixesha. Kwaye ukuba uthetha ntoni ngokuthi "vumela" kukuba "Ndifuna," ke yithetha nje okulinganayo - kulula kakhulu!
Eminye yezenzi ongazisebenzisayo ukuguqulela "vumela" okanye amabinzana asetyenziswayo "vumela" ukuquka i- liberar (ukuyeka), i- alquilar (ukuqeshisa), isaziso (ukuvumela umntu ukuba azi), i- soltar (ukuyeka), i-fallar (ukuyeka phantsi okanye ukudideka), i- perdonar (ukuvumela umntu ukuba ahambe, ukuxolela) kunye ne- cesar (ukuyeka). Konke kuxhomekeke kwintsingiselo yento ozama ukuyithetha.
Kwaye, ngokuqinisekileyo, ngesiNgesi sisebenzisa "vumela" ukudala umyalelo womntu wokuqala , njengokuthi "masihambe" okanye "makhe sihlabelele." NgesiSpeyin, loo ntsi ngiselo ichazwe kwifom ekhethiweyo (efana nomntu wokuqala wokuzimela ngobuninzi), njenge- salgamos kunye ne- cantemos , ngokulandelanayo.
Ekugqibeleni, iSpeyin ngezinye izihlandlo zisebenzisa ilandelelwe ngesenzi kwisigqibo sokumisela umyalelo ongaqondile ongaguqulelwa ngokuthi "vumela," kuxhomekeke kumongo. Umzekelo: Yenza abo bafumane i-laicina. (Mye aye eofisini, okanye amvumele aye eofisi.)
Nazi izivakalisi ezibonisa inguqulelo enokwenzeka yokuba "vumela":
El gobierno cubano liberó al empresario. (Urhulumente waseCuba uvumele ukuba usomashishini ahambe.)
Dweba hablar sin interrupción. (Makhe athethe ngaphandle kokuphazanyiswa.)
Te comunicaremos si algo ha cambiado. (Siza kukuxelela ukuba nayiphi na into ishintshile.)
Los captores soltaron a los rehenes a las cuatro de la madrugada. (Abafakiweyo bavumela ama-hostages mahhala ngo-4 ekuseni)
Me fallaba muchísimo. (Undivumele phantsi.)
Vive y dejar vive. (Phila kwaye uvumele ubomi.)
Akunjalo nam inkohliso ye-porous no-espero nada de nadie. Akukho mntu undivumela phantsi kuba andikulindeli nto kumntu.
Impazamo ye-alquilaron un piso ngo-2013 nge-400 euro nge-semana. (Abazali bam baphuma phantsi ngo-2013 ngee-euro ezingama-400 ngeveki.)
¡Me deja en paz! (Makhe ndodwa!)
Avísame si no puedes hacerlo. (Ndixelele ukuba awukwazi ukwenza.)
Por fin aflojó la ira de la tormenta. (Ubushushu beqhwithi siphelile.)
I-Hay ciertos amacos a non que quiero dejar entar en mi casa. (Kukho abahlobo abangafuniyo ukungena endlwini yam.)
Yenza i-entonces, yenze i-intanethi ibe yinto efanelekileyo yokuziphatha. (Ukususela ngaloo ndlela, waziyeka waza wangena emzimbeni nangokwemvelo.)
Umzekelo weZigwebo ze-Verb Keep
Umzekelo wesigwebo seLebhu
Ixesha elizayo ligqibelele ngeSpanish
Imfazwe Yehlabathi II: iDeadstick yokuSebenza
I-Chytrid Fungus ne-Frog Extinctions
Indlela yokuhlwayela i-Acorn kwaye Ukhule umthi we-Oak
Landela iMigaqo eSeko kunye neMigqaliselo yokudala i-Art Great
Ixesha eliqhelekileyo kwiNkcazelo yoMculo
AmaSulumane Amantombazana Abantwana AbamaSulumane